Waa Maxay Dhigashada Kitaabka? | Suʼaalaha la is Weyddiiyo
KU AKHRI Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Biak Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Gitonga Greek Greenlandic Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kalanga (Botswana) Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khakass Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Laotian Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Luxembourgian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mari Martiniquan Creole Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Liiska download gareyska maqalka Waa Maxay Dhigashada Kitaabka?
Markhaatiyaasha Yehowah waxay bixiyaan barnaamij dhigashada Kitaabka oo ka jawaabo suʼaalo badan, sida:
Guurkayga sidee baan u wanaajin karaa?
Hoos waxaad ka heli doontaa jawaabaha suʼaalo lays weyddiiyo oo ku saabsan barnaamijkeenna dhigashada Kitaabka.
Waa sidee qaabka casharrada? Waxaan soo hadal qaadnaa mawduucyo sida “Ilaahay” ama “Guurka.” Dabadeed waxaan eegnaa aayadaha Kitaabka oo ku xiriirsan mawduucyadaas. Markaan aayadahaas isbarbardhigno waxaan aragnaa Kitaabka gebigiis wuxuu ka sheego arrimahaas oo sidaasaan ugu banneynaa inuu Kitaabka isfasiro.
Dhigashada Kitaabka waxaa inagu caawin karo buugga War Wanaagsan Ilaahay ka yimid! Buuggan si sahlan ayuu u soo bandhigaa arrimo ku saabsan wuxuu Kitaabka ka sheego Ilaahay, nebi Ciise, mustaqbalkeenna iyo waxyaalo kale oo badan.
Ma lacag baa laga bixiyaa dhigashada Kitaabka? Casharrada iyo qalabyada waxbarashadaba waa bilaa lacag.
Muddo intee leʼeg ayay soconayaan casharrada? Dad badan asbuucii waxay qorsheysteen saacad ama wax ka badan inay Kitaabka inala dhigtaan. Laakiin dhererka casharrada qof walba iskiisuu u dooran karaa oo wuxuu ku xiran yahay qorshahaaga.
Maxaa dhici doono markaan codsado inaan dhigto Kitaabka? Markaad codsatid inaad Kitaabka dhigatid, mid ka mid ah Markhaatiyaasha Yehowah ayaa meel iyo waqti kuu habboon kugu soo booqon doono. Dhawr daqiiqo ayuu kugu tusi doonaa sida loo fuliyo barnaamijkeenna waxbarashada. Haddii ad ka heshid, waad sii wadan kartaa.
Haddaan aqbalo inaan Kitaabka dhigto, ma inaan Markhaatiyaasha Yehowah ka mid noqdaa? Maya. Markhaatiyaasha Yehowah way jecel yihiin inay dadka Kitaabka baraan, haddaba weligeen qof kuma qasabno inuu diinteenna ka mid noqdo. Si ixtiraam iyo nimco leh ayaan u tusnaa waxa Kitaabka ku qoran innagoo garanayno inuu qof walba xaq u leeyahay inuu doorto wuxuu aammini lahaa.—Kolosay 4:6.
Ku Raaxayso Nolosha Weligeed ah!​—Hordhaca Casharrada Kitaabka
Qormadan waa hordhaca barnaamijka dhigashada Kitaabka oo bilaa lacagta ah.
Wadaag Wadaag Waa Maxay Dhigashada Kitaabka?